မီးဘေးသင့်ပြည်သူများအား ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများထောက်ပံ ~ Myaylatt Daily.
မွလေတျဒသေအတှငျးမှ ထူးခွား သတငျးမြားကို ဖိတျချေါအပျပါသညျ။ myaylatmedia@gmail.com
4:40 PM သတင်း No comments
မကွေး မတ် ၁၈
မကွေးမြို့နယ် ကန်သာကြီးကျေးရွာအုပ်စု ညောင်ပင်သာကျေးရွာတွင် မီးဘေးသင့်ပြည်သူ (၇၄၂)ဦးတို့အတွက် အလှူငွေနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနား ကို ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီက အဆိုပါကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း မီးဘေးကယ်ဆယ်ရေး စခန်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အခမ်းအနားတွင် လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ (၄၆၅၅၉၂၆/-)တန်ဖိုးရှိ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်း(၉)မျိုးကို အိမ်ထောင်စု(၂၁၁)စုအတွက် လည်းကောင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည့် နေအိမ်(၁၈၂)လုံး ဆောက်လုပ်ရန် ငွေကျပ်(၅၄၆)သိန်းနှင့် မီးဘေးသင့်ပြည်သူ(၇၄၂)ဦးတို့အတွက် ဆန်(၅)ရက်စာ ကျသင့်ငွေ (၁၁၂၃၂၀၀/-)တို့အား တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူး ဦးမြင့်စိုးက ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ရာ မီိးဘေးသင့် ပြည်သူများက အိမ်ထောင်စုအလိုက် လက်ခံရယူခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မွလေတျဂြာနယျ အတှဲ-၆၊ အမှတျ- ၁၄ ။ နိုဝငျဘာ( ၁၆-၃၀) ရကျထှကျ ဂြာနယျကို နိုဝငျဘာ( ၁၅-၁၆) ထုတျဝဖွေနျ့ခြိပေးပါမညျ….။
မွလေတျဂြာနယျ အတှဲ - ၆၊ အမှတျ - ၁ ၄ ။ နိုဝငျ ဘာ ( ၁ ၆ - ၃၀ ) ရကျထှကျ ဂြာနယျကို နိုဝငျ ဘာ ( ၁ ၅ - ၁၆ ) ထုတျဝဖွေနျ့ခြိပေးပါမညျ …. ။ ...
မွလေတျဂြာနယျ အတှဲ-၆၊ အမှတျ- ၁၆ ၊ ၂၀၂၀၊ ဒီဇငျဘာ (၁၆-၃၁) ရကျထှကျ ဂြာနယျကို ဒီဇငျဘာ ၁၅/၁၆ ရကျ ထုတျဝဖွေနျ့ခြိပေးပါမညျ….။
မွလေတျဂြာနယျ အတှဲ - ၆၊ အမှတျ - ၁ ၆ ၊ ၂၀၂၀၊ ဒီဇငျဘာ ( ၁၆ - ၃၁ ) ရကျထှကျ ဂြာနယျကို ဒီဇငျဘာ ၁၅/၁၆ ရကျ ထုတ...
မွလေတျဂြာနယျ အတှဲ-၆၊ အမှတျ- ၁၅ ဒီဇငျဘာ (၁-၁၅) ရကျထှကျ ဂြာနယျကို နိုဝငျဘာ ၃၀ ရကျမှ ဒီဇငျဘာ ၁ ရကျအတှငျး ထုတျဝဖွေနျ့ခြိပေးပါမညျ….
မွလေတျဂြာနယျ အတှဲ-၆၊ အမှတျ- ၁၅ ဒီဇငျဘာ (၁-၁၅) ရကျထှကျ ဂြာနယျကို နိုဝငျဘာ ၃၀ ရကျမှ ဒီဇငျဘာ ၁ ရကျအတှငျး ထုတျဝဖွေနျ့ခြိပေးပါမညျ….။ ကားလိ...
မွလေတျဂြာနယျ အတှဲ-၆၊ အမှတျ- ၁၈ ၊ ကို ၂၀၂၁ ဇနျနဝါရီလ (၁၆-၃၁) ရကျထှကျ ဂြာနယျကို ၂၀၂၁ ဇနျနဝါရီ ၁၅/၁၆ ရကျနေ့ ထုတျဝဖွေနျ့ခြိပေးပါမညျ….။
မွလေတျဂြာနယျ အတှဲ-၆၊ အမှတျ- ၁၈ ၊ ကို ၂၀၂၁ ဇနျနဝါရီလ (၁၆-၃၁) ရကျထှကျ ဂြာနယျကို ၂၀၂၁ ဇနျနဝါရီ ၁၅/၁၆ ရကျနေ့ ထုတျဝဖွေနျ့ခြိပေးပါမညျ….။ ကားလို...
မွလေတျဂြာနယျ အတှဲ-၆၊ အမှတျ- ၁၇၊ကို ၂၀၂၁ ဇနျနဝါရီလ (၁-၁၅) ရကျထှကျ ဂြာနယျကို ဒီဇငျဘာ ၃၁ ရကျမှ ၂၀၂၁ ဇနျနဝါရီ ၁ ရကျနေ့ ထုတျဝဖွေနျ့ခြိပေးပါမညျ….။
မွလေတျဂြာနယျ အတှဲ-၆၊ အမှတျ- ၁၇၊ကို ၂၀၂၁ ဇနျနဝါရီလ (၁-၁၅) ရကျထှကျ ဂြာနယျကို ဒီဇငျဘာ ၃၁ ရကျမှ ၂၀၂၁ ဇနျနဝါရီ ၁ ရကျနေ့ ထုတျဝဖွေနျ့ခြိပေးပါမညျ…...
မွလေတျဂြာနယျ အတှဲ-၆၊ အမှတျ- ၁၃ ။ နိုဝငျဘာ( ၁-၁၅) ရကျထှကျ ဂြာနယျကို စာမကျြနှာ ၂၄ ကို အနယျနယျအရပျရပျမှ စာဖတျသူမြားနှငျ့ စာမူရှငျမြားအတှကျ မတ်ေတာလကျဆောငျ တငျပေးထားပါသညျ/။
မွလေတျဂြာနယျ အတှဲ - ၆၊ အမှတျ - ၁ ၃ ။ နိုဝ ငျ ဘာ ( ၁ - ၁၅ ) ရကျထှကျ ဂြာနယျကို အောကျတိုဘာ ၃၁ ရကျမှ နိုဝ ငျ ဘာ ၁၅ ရကျအတှငျး ထုတျဝဖွေနျ့ခြ...
မွလေတျဂြာနယျ အတှဲ-၆၊ အမှတျ- ၁၂ ။ အောကျတိုဘာ( ၁၆-၃၁) ရကျထှကျ ဂြာနယျကို အောကျတိုဘာ ၁၆ ရကျမှ ၃၁ ရကျအတှငျး ထုတျဝဖွေနျ့ခြိပေးပါမညျ….။
မွလေတျဂြာနယျ အတှဲ - ၆၊ အမှတျ - ၁၂ ။ အောကျတိုဘာ ( ၁၆ - ၃၁ ) ရကျထှကျ ဂြာနယျကို အောကျတိုဘာ ၁ ၆ ရကျမှ ၃၁ ရကျအတှငျး ထုတျဝဖွေနျ့ခြ...
မွလေတျဂြာနယျ၊ အတှဲ-၆ ၊ အမှတျ-၁၀ ထှကျဂြာနယျကို ပထမ ကွညောထားတဲ့ အတိုငျး စကျတငျဘာ ၁၅/၁၆ ရကျနေ့ နယျအခြို့သို့ မပို့နိုငျသေးပါခငျဗြား..။
မွလေတျဂြာနယျ၊ အတှဲ-၆ ၊ အမှတျ-၁၀ ထှကျဂြာနယျကို ပထမ ကွညောထားတဲ့ အတိုငျး စကျတငျဘာ ၁၅/၁၆ ရကျနေ့ နယျအခြို့သို့ မပို့နိုငျသေးပါခငျဗြား..။ မကှေးတ...
မကှေးတိုငျးဒသေကွီးအတှငျး အစားအသောကျရောငျးခသြညျ့ဆိုငျမြားအား ဆိုငျထိုငျစားသုံးခွငျးကို ခှငျ့မပွုစရေေး ညှနျကွားဆောငျရှကျရနျနှငျ့ ပါဆယျဝယျယူစားသုံးစရေေး ပွညျသူမြားသို့ အသိပေးခပြွဆောငျရှကျရနျ အကွောငျးကွားစာ။
မကှေးတိုငျးဒသေကွီးအတှငျး အစားအသောကျရောငျးခသြညျ့ဆိုငျမြားအား ဆိုငျထိုငျစားသုံးခွငျးကို ခှငျ့မပွုစရေေး ညှနျကွားဆောငျရှကျရနျနှငျ့ ပါဆယျဝ...
Law Proverbs ဥပဒေ (စကားပုံ) ဆိုရိုးစကားများ
Everyone is equal before the law. လူတိုင်းသည် ဥပဒေအရာတွင် တန်းတူဖြစ်သည်။ Ignorance of law is no excuse. မသိနားမလည်လို့ ကျူးလွန်မိတာပါလိ...
မြေလတ်မီဒီယာ ဂျာနယ်များ ယူရန်
ဘူးကျေးရွာ သုတကမ္ဘာ စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲကျင်းပ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ...
*ပခုက္ကူမြို့ *၌ *စိတ်ကြွဆေးပြားများ လက်ဝယ်ထားရောင်...
မင်းဘူးမြို့တွင် ကမ္ဘာ့တီဘီ ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အထ...
သဘာဝတောထိန်းလုပ်ငန်းမှ ထွက်ရှိသောထင်းများ အခမဲ့ ဖြ...
တတိယအကြိမ် ငဖဲမြို့လုံးဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်း...
မြေလတ်ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၄) ၂၀၁၆၊ ဧပြီ ၁-၁၅ ရက်...
ညောင်ကိုင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး မှူးပြန်လည် ရွေးချယ...
မင်းဘူးမြို့တွင် ကုန်တင်ကားအမိုးကိုင်းနှင့် လျှပ်စ...
မင်းဘူးမြို့တွင် ကုန်တင်ကားအမိုးနှင့် လျှပ်စစ်မီြး...
*ရေစုတ်စက် တာလပတ်ကြိုးအတွင်း ထမီစငြိပါသွားရာမှ အမျ...
မကွေးတိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးရှေ့ရှိ ဆေးဆိုင်မှ မူ...
Ooredoo ကုမ္ပဏီ(မကွေးရုံးခွဲ)မန်နေဂျာအား မိမိကိုယ်က...
မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် စူဠဘွဲ့နှင်...
ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အ...
မြို့သစ် မြို့နယ် အောင်ချမ်းသာ ကျေးရွာ သို့ သောက်သ...
မင်းဘူးမြို့ ကုန်းသာကျေးရွာတွင် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွား
ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးအား ကြေညာချိန်တွင် ...
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီအမတ်များ လွှတ်တော်ကို သပိတ်မှော...
မကွေးတိုင်းဝန်ကြီချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုနှင့် RF...
ဦးညီပုကုို ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် တင်ြေ...
ဝန်ကြီးချုပ်လျာထားခံရသူ တချို့ရဲ့ အသံ
တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် အမည်စာရင်း ထွက်ပြီ
တစ်လကြာ အခြေခံသတင်းစာပညာသင်တန်း မန္တလေးတွင် ဖွင့်လှ...
မန်းရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲတော် မန်းချောင်းအတွင်း ကျောင...
*နွားစာအတွက် ထန်းနို့ခုတ်ရာမှ အမျိုးသားတစ်ဦး ထန်း...
ရေခပ်နေစဉ် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကမ်းပါးပြိုကျမြေကြီးတံ...
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်...
အိမ်တွင်း စကော၊စကာနှင့် တင်းတောင်းယက်လုပ်ခြင်းဖြင်...
ဆင်ဇာချောင်း တံတားနှင့်ဘုရင့်နောင်လမ်း ကတ္တရာလမ်းဖွ...
မင်းဘူးခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင် စာကြည့်တို...
စလင်းမြို့မှ မြန်မာ့ရိုးရာ ယက္ကန်းစင် လုပ်ငန်း အောင...
(၇၁)နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအား...
ပေါက်မြို့နယ် ၌ ပိုင်ရှင်မဲ့သစ်ကားတစ်စီးဖမ်းဆီး
ငဖဲမြို့နယ်တွင် စာကြည့်တိုက် ၀န်ဆောင်မှု မြှင့်တင်ေ...
လက်ပံရွာသစ်ကျေးရွာတွင် ပညာရောင်ခြည် စာကြည့်တိုက်ဖွ...
အမျိုးသမီးရေးရာကဏ္ဍ ပြောရအုံးမယ် သူငယ်ချင်းရေ….(၁)
မကွေးမြို့နယ် ညောင်ပင်သာကျေးရွာ မီးဘေးသင့်ပြည်သူမျ...
ဆင်ဖြူ ကျွန်းမြို့ တွင် ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ရေး ဆော...
မင်းဘူးမြို့နယ် သီးကုန်းကျေးရွာတွင် ထင်းများ အခမဲ့...
သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ်မှုမရှိစေရေး ရေလှူဒါန်း
တိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်ရုံးတွင် အရည်အချင်းမြှင့်တင...
မကွေးမြို့နယ် ညောင်ပင်သာရွာလုံးကျွတ် မီးလောင်ခဲ့တဲ...
မကွေးမြို့နယ် ညောင်ပင်သာ ကျေးရွာ မီးဘေးသင့် ပြည်သူ...
မကွေးမြို့နယ် ညောင်ပင်သာကျေးရွာတွင် ယနေ့ (မတ် ၁၆ ရ...
မကေွးမြိုနယ် ကံသာကြီးအုပ်စု ညောင်ပင်သာရွာ နေ့လည် ၁...
ဒုတိယအကြိမ်မြောက် နွေရာသီ ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်...
မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ် စာရေးဆရာအသင်း မျက်နှာစုံညီ အစ...
မ​ကွေးမြို့တွင်​ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်​နှစ်​အတွက်​ ကိုယ...
မင်းဘူးမြို့ ရပ်ကွက်နေပြည်သူများ သောက်သုံရေဖူလုံစွ...
သန်းခေါင်စာရင်းအချက်အလက်များ အသိပညာပေးခြင်း အလုပ်ရ...
၂၀၁၆-ခုနှစ် အယ်နီညိုရာသီဥတုကာလ ပြည်သူများအား အသိပည...
စာကြည့်တိုက်များ ၀န်ဆောင်မှု မြှင့်တင်ရေး အလုပ်ရုံေ...
စလင်းမြို့ နယ် ဘူးခါးကျေးရွာစာသင်ဆောင်အား အမြန်ဆုံ...
စေတုတ္တမြို့နယ်တွင် လျှပ်စ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ဆောင...
မ​ကွေးမြို့နယ်​စာ​ရေးဆရာအသင်း အလုပ်​အမှု​ဆောင်​ အဖ...
မြေလတ်ဂျာနယ် အတွဲ(၂) အမှတ်(၃) ၂၀၁၆၊ မတ်လ(၁၆-၃၁) ဂျ...
မျိုးစေ့မူဝါဒ၊ ဥပဒေ နှင့် နည်း ဥပဒေဆိုင်ရာ ဆွေးနွေ...
ဖျောက်ဆိတ်ကုန်းကျေးရွာ မီးဘေးသင့်ပြည်သူများအား ထော...
မီးဘေးလုံခြုံရေး သရုပ်ပြ ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်
ရေဘေးသင့် အခြေခံပညာကျောင်းများအား စာရေကိရိယာများေ...
ပွင့်ဖြူမြို့နယ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အေးချမ်းစ...
နွေစပါး လျာထား ဧက ပြည့်မီရေး အလေးထား ဆောင်ရွက်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်...
မန်းရွှေစက်တော် ဓါတ်ပုံဆရာများ ဟန်းဖုန်းများကြောင့်...
မင်းဘူးမြို့ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အေးချမ်းစွာ ဖြေဆု...
၂၀၁၆/တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများ အေးချမ်းစွာေ...
မြိုင်မြို့နယ် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမ...
မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ် အခြေခံပညာစာစစ်ဌာနများ လျှပ်စစ...
ဖျောက်ဆိပ်ကုန်းကျေးရွာ မီး​ဘေးသင့်် အိမ်ခြေ(၁၀၂)...
► 2015 (1591)
► 2014 (902)
မွလေတျဒသေ သတငျးစာသညျ အမြား ပွညျသူ၏ ကောငျးကြိုးအတှကျ ဖွဈသညျ။
Copyright © 2014 Myaylatt Daily. | Powered by Blogger